Public UK တွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ယူကေတွင် PL
သင်ဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို UK ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
Million Makers UK သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို UK နှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံများအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
UK တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေမှကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့် Free Zone ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
UK ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများ (အမှာစာရှိလျှင်) ပေးခြင်း။
UK နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ဗြိတိန်အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ ယူကေအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ယူကေအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ယူကေအတွက် CRM Solutions၊ ယူကေအတွက် virtual ရုံး၊ ယူကေအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ UK Public Limited ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှာပါ
ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန် (ဗြိတိန်သို့မဟုတ်ယူကေ) သည်ဗြိတိသျှကျွန်းအများစုပါဝင်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဘုရင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပြည်ထောင်စုသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ သက်တမ်းရှိပြီးအင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သောနိုင်ငံလေးခုပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဂရိတ်ဗြိတိန်ကျွန်း၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်းအီရီကျွန်းနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောဗြိတိသျှကျွန်းများအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းအိုင်ယာလန်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ပြင်သစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ စပိန်၊ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ယနေ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်လူမျိုးနှင့်ပြောင်းရွှေ့လာသူများယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ကာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ Britannia သည်လှိုင်းများကိုမအုပ်ချုပ်သော်လည်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ခရီးသွားများစွာအတွက်လူကြိုက်များသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးလန်ဒန်မြို့သည် NY နှင့်အတူတကွရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးပါမှုအရအရေးပါဆုံးမြို့နှစ်မြို့တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်ထူးဆန်းသောကျေးရွာများနှင့်လှပပြီးလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲလာသောကျေးလက်ဒေသကိုသိရှိရန်လာကြသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့်လန်ဒန်မြို့သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ္centerာရေးဗဟိုဌာနဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ လန်ဒန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်ကုန်စည်ဈေးကွက်များတွင်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ ၁၉၈၀ နှင့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းစီးပွားရေးအတွက်အဓိကကျသည်။ သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တန်ဖိုးတစ်ခုလုံးသည်တိုင်းပြည်၏ဂျီဒီပီ၏ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ (နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့ဂျီဒီပီ၏ငါးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်။ )
ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ယူကေတွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ယူကေတွင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
UK ၌ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် UK ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအစအဆုံးသတ်ရန်နှင့် UK ၌ virtual office၊ UK ၌ပြုလုပ်ထားသည့်စိတ်ကြိုက် HR ဖြေရှင်းချက်များကို UK ၌ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ဗြိတိန်တွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင် virtual နံပါတ်၊ ဗြိတိန်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ယူကေတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗြိတိန်တွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဗြိတိန်ရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်အကောင့်ယူကေ၊ ဗြိတိန်တွင် Web Development၊ ဗြိတိန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဗြိတိန်ရှိ Ecommerce Development၊ ယူကေရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ယူကေတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယူကေရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစသည်တို့ကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတတ်နိုင်သော၊
ယူကေတွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် UK နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် UK မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၌အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် UK နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ် ၀ င်စားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများအားငှားရမ်းရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဗြိတိန်တွင်ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဗြိတိန်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ယူကေတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကေရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဗြိတိန်ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway ယူကေတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ယူကေတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ဗြိတိန်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ လိုက်နာခြင်း၊ ဗြိတိန်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ၀ က်ဘ်တည်ဆောက်မှု၊ ယူကေရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယူကေတွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်အနည်းငယ်ကိုအမည်ပေးရန်ဗြိတိန်တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ယူကေအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗြိတိန်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဗြိတိန်နဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှ ၀ န်ဆောင်မှုအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှမပေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာအရဗြိတိန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE UK အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း UK (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း UK (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း UK
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း UK
UK စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ယူကေကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ယူကေရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် UK ကုမ္ပဏီအတွက် Chop and Seal
●ယူကေအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်ခ (ဒေါ်လာ ၁၀၀)
●ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၆၅
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ UK TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●ယူကေရှိ Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်း
●ယူကေရှိ Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရန်
● UK ၌အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
UK ၌စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။ သင်သည် UK သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရှာနိုင်သည်။
Public Limited ကုမ္ပဏီ UK အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သန်းပေါင်းများစွာသော Makers မှတဆင့်ဗြိတိန်၌တည်၏
သင်သည်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် UK ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ ယူကေရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ယူကေတွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကြီးများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့် UK ၌ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် ယူကေ၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဗြိတိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ဗြိတိန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အဘို့ ယူကေတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ယူကေရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
UK UK အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ UK ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် UK.
UK ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် UK ၌ Company Incoporation နှင့် UK ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
ယူကေရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူကေရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်အတူဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များသည်ဗြိတိန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဗြိတိန်တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ယူကေတွင် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကို UK ၌အပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ UK နှင့် 106 နိုင်ငံများရှိစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ UK ၌အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
WE UK အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ယူကေရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ယူကေရှိ PL၊
ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် UK / PL တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Public Limited Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
Public Limited ကုမ္ပဏီကို UK တွင် PL / UK ၌မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
Public Limited ၏ UK တွင် PL / UK ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ယူကေရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ / ယူကေတွင် PL ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည် UK ၌ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုခြင်းကိုယူကေတွင်ခွင့်ပြုခြင်းပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် UK ၌ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်လိုင်စင်မပါသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: Gaming, လောင်းကစား, ထီ, ဗြိတိန်၌နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်အရောင်းအဝယ် / အငှား, ဗြိတိန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း, UK အတွက်အာမခံစီးပွားရေး, ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံပြီးဆင်းသက်လာတူရိယာနှင့်ဗြိတိန်ရှိအခြားအာမခံ, ဘဏ္UKာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့, ဗြိတိန်ရှိငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ, ပိုက်ဆံ: ယူကေတွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း၊
ယူကေရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ ဗြိတိန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်များသို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဗြိတိန်နှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီများ" အတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
သန်းနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများသည်ဗြိတိန်တွင်သာမကဗြိတိန်တွင် Professional CFA၊ ဗြိတိန်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
UK ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ UK ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် UK နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့မှဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ယူကေရှိ Corporate Services | Edinburgh အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ယူကေတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူကေတွင်ရှိသောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ယူကေတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူကေတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးသူများ၊ ဗြိတိန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ယူကေရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူကေတွင်ရှိသောကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူကေရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ
ယူကေရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Edinburgh အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဗြိတိန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဗြိတိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် UK.
ဗြိတိန်ရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဗြိတိန်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးသင်ပြင်ပမှရယူနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဗြိတိန်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ ယူကေတွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ UK ၌စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ယူကေတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဗြိတိန်၌ "
ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ UK.
ယူကေရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဗြိတိန်မှ။
ဗြိတိန်ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ UK ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င် UK ရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - UK အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ယူကေရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် UK ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဗြိတိန်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း UK ယူကေတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ယူကေရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု UK, ယူကေရှိ CryptoCurrency software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ယူကေရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစျေးသက်သာတဲ့ Software Development ယူကေရှိစျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဗြိတိန်တွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ပါဝင်သည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏တိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလိုက်နာသူများ။ ယူကေရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ ဦး စားပေးမှုရှိသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းကိုရိုးသားစွာဗြိတိန်တွင်သူတို့ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ယူကေတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင် Public Limited ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကို UK ၌အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ရှိသောအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Offshore Public Limited ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်တွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူကေအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ယူကေတွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု ဗြိတိန်တွင် PL ပါဝင်မှု | ဗြိတိန်တွင်ကန့်သတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဗြိတိန်တွင်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
ဗြိတိန်တွင် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ကမ်းလွန် PL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေတွင်ကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင် Offshore PL မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ , UK PL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ UK PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေ PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန် PL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ယူကေတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများကိုဗြိတိန်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း၊ ယူကေတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်ရှိကမ်းလွန်လီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , UK Limited ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ယူကေတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများကိုဗြိတိန်တွင်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တည်ထောင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Public Limited ကိုယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ PL တွင် UK ၌မှတ်ပုံတင်ပါ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဗြိတိန်တွင်လီမိတက် | လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဗြိတိန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ယူကေတွင်ထောက်ခံမှုများမှာ - Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Edinburgh မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Edinburgh မှ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Edinburgh မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဗြိတိန်တွင်စျေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Edinburgh တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယူကေရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှယူပြီးဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဗြိတိန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်အောင်မြင်သည်။ Edinburgh ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ , Edinburgh ရှိ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Edinburgh တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူကေတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ပေးအပ်သည်မှာ UK တွင်စျေးအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူကေ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Edinburgh ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
ယူကေရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Edinburgh တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Edinburgh တွင်တည်ဆောက်သည်။ Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မည်။
ယူကေရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Edinburgh တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားဗြိတိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အက်ဒ်ဘာ့ဂ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Edinburgh ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ UK | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Edinburgh
ယူကေရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Edinburgh တွင်
ဗြိတိန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) ဗြိတိန်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်ဗြိတိန်တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ယူကေတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Edinburgh တွင်ထည့်သွင်း
Public Limited တွင် UK ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ယူကေတွင် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူကေတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူကေတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒေသခံမဟုတ်သူများအား UK Public Limited ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ UK ၌ Offshore Public Limited ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ UK တွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ UK တွင် Public Limited ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ UK Public Limited ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းဗြိတိန်ကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်၌ကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် PL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူအက်စ် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန် PL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေတွင်ကမ်းလွန် PL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေနှင့်ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့် UK လီမိတက်၊ UK တွင်ကမ်းလွန်ရေနံနှင့်အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေရှိကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ ယူကေတွင်ရှိသောကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပါဝင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တည်ထောင်ခြင်း၊ UK, UK လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊
ယူကေတွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ဗြိတိန်တွင် PL ထည့်သွင်းပါ ဗြိတိန်တွင် Incorporate လီမိတက် | ဗြိတိန်တွင်လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ
ယူကေရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ယူကေရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗြိတိန်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ယူကေ၌သင်၏ကုမ္မဏီပါဝင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေ၊
ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းမြင့်မားသောကုမ္ပဏီစာရင်းအင်းများကြောင့်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဗြိတိန်တွင်နှင့် UK ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားယူကေရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ယူကေရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင်
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ယူကေရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Edinburgh တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဗြိတိန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး UK ကိုကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ အလားတူဗြိတိန်တွင်လည်း Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Edinburgh တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် (သို့) Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Edinburgh တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Edinburgh ။
ယူကေတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Edinburgh တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
နံပါတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်း- ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်
HM ဘဏ္asာရေး (www.hm-treasury.gov.uk/)
အစိုးရ Portal ဝဘ်ဆိုက် (www.i-uk.com)
ဗြိတိသျှသံရုံး၊ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု ဦး စီးဌာန (www.dti.gov.uk/)
Virgin Atlantic လေကြောင်းလိုင်း
ပုဂ္ဂလိကအဖြူရောင် VC ကို
Destination United Kingdom - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
Guardian Unlimited: ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ခရီးသွားပါ
London Symphony သံစုံတီးဝိုင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ဘီဘီစီ Couနယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - United Kindom
ntry ကိုယ်ရေးဖိုင်: ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
FAO - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
OEC - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
The World Factbook - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
သြစတြေးလျ၏ Reserve Bank သည် www.rba.gov.au
Banco Central do Brasil - ဘရာဇီးဗဟိုဘဏ် www.bcb.gov.br/?english
Ceska Národní Banka - ချက်သမ္မတနိုင်ငံ www.cnb.cz/en/index.html
Danmarks Nationalbank - ဒိန်းမတ်အမျိုးသားဘဏ် www.nationalbanken.dk/dnuk/specialdocuments.nsf
Banco Central de la República Dominicana - ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံဗဟိုဘဏ် www.bancentral.gov.do
အိန္ဒိယ Reserve Bank www.rbi.org.in
Banque de France - ပြင်သစ်ဘဏ် www.banque-france.fr/home.htm
Eesti Pank - အက်စ်တိုးနီးယားဘဏ် www.eestipank.info/frontpage/en/
Bank Negara Malaysia - မလေးရှားဗဟိုဘဏ် www.bnm.gov.my
Banca Slovenije - စလိုဗေးနီးယားဘဏ် www.bsi.si/en
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ယူကေရှိငွေခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားထောက်ခံမှုမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ UK အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သောစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ယန္တရားထောက်လှမ်းခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူမည်းများ (UK) ၏ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သူများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းစီသို့ဖြစ်စေ၊ ဗြိတိန်မှဖြစ်စေဗြိတိန်မှဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒနှင့်ဆက်ဆံသည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းသည်ယူကေရှိသို့မဟုတ်ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ယူကေမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်နျူကလီးယားပစ္စည်းများ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ယူကေအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့လာရောက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
●မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးအပါအ ၀ င်ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်အပါအ ၀ င်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်ယူကေအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှဖြစ်စေ၊
●ယူကေအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောဗြိတိန်တွင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ယူကေအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ ဗြိတိန်သို့ဖြစ်စေ၊
●ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် UKတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် UK, UK ဘဏ်အကောင့်, UK ယုံကြည်မှု UK ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု UK။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ယူကေအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-uk-public-limited/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-uk-public-limited/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-uk-public-limited/